सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा भाडा तिर्दैनन् ट्राफिक प्रहरी !Main Samachar
३ आश्विन २०७८, आईतवार १७:४३ प्रकाशित
काठमाडौँ । रत्नपार्कबाट अनामनगर हुँदै बानेश्वर चल्ने टेम्पो भद्रकाली मन्दिर कटेपछि रोकियो । दुई जना प्रहरी जवानले रोक्ने इशारा गर्दै हात दिएका रहेछन् ।
सामान्य अवस्थामा त्यहाँ कुनैपनि सवारी साधन रोक्न अनुमती छैन । रोकेको भेटिए ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्छ । तर, प्रहरीले नै रोक्ने इशारा गरेपछि भने चालकले सहज रुपमा टेम्पो रोके ।
दुईमध्य एकजना प्रहरी चढे । न्यू प्लाजा कटेर अगाडि महानगरीय प्रहरी बिट सिंहदरबार आइपुग्न लाग्दा यात्रुको इशारापछि चालकले टेम्पो रोके । ती प्रहरी जवान टेम्पोबाट उत्रिए र खुरुखुरु कार्यालयतर्फ लागे । न उनले भाडा दिए न त चालकले भाडा माग्ने हिम्मत नै गरे । टेम्पोमा सवार अन्य यात्रुहरु भाडा नतिर्ने प्रहरी जवानलाई क्वारक्वारती हेर्दै थिए ।
अलिक पर पुगेपछि टेम्पो चालकलाई सोधेँ, ‘ती प्रहरी त भाडा नै नतिरी गए नि ! तपाईले नि माग्नुभएन किन ?’ जवाफमा उनले भने, ‘ट्राफिक र प्रहरी यस्तै हुन् । सार्वजनिक सवारी चढेपछि भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चेत सबैलाई हुन्छ तर उहाँहरु आफ्नो गन्तव्यमा आएपछि उत्रिनुहुन्छ र चुपचाप जानुहुन्छ ।’
‘भाडा किन नमाग्नुभएको त ?’ मेरो प्रश्नमा उनले भने, ‘गाडी चढेपछि भाडा तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि, तर दिँदैनन् । प्रहरी भएका कारण माग्न पनि केही अप्ठ्यारो र अलिअलि डर लाग्छ । यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ ।’
चालकले अहिलेसम्म आफ्नो टेम्पोमा यात्रा गर्ने कुनैपनि ट्राफिक प्रहरीहरुले भाडा नतिरेको बताए । ट्राफिसँग भाडा माग्यो भने चिट काटिदेला भन्ने डर । भाडा नतिरेकोमा मनमनै रिस त उठ्छ नि, तर के गर्नु १५/२० रुपैयाँ माग्दा पाँच सय/हजारको कारवाही भयो भने दिनभरीको पसिना खेर जान्छ । बरु चुप लागेर बस्छु,’ उनले भने ।
आइतबार थानकोट कलंकी चल्ने सार्वजनिक यातायातमा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो । कलंकी नजिकबाट एकजना ट्राफिक प्रहरी चढे । ट्राफिक नै चढेपछि चालक केही सजग भएर गाडी चलाइरहेका थिए ।
त्रिपुरेश्वर आइपुग्दा सहचालकले सबैलाई भाडा ठिक बनाउन अनुरोध गरे । उत्रिँदा सहज होस् भन्नका लागि सहचालक गन्तब्य आउनुअघि नै भाडा लिन्छन् । यसले यात्रुलाई पनि सहज हुन्छ । ती सहचालकले सबैसँग भाडा मागे तर सोही बसमा यात्रा गरिरहेका तिनै ट्राफिक प्रहरीसँग भने भाडा मागेनन् । सबैले भाडा दिए तर ट्राफिक प्रहरीले भाडा दिन आवश्यक ठानेनन् ।
सुन्धारा आएपछि गाडी रोकियो । गाडीमा सवार सबैजना पालैपालो उत्रिए । ती ट्राफिक प्रहरी पनि उत्रिए । उनी भाडा नतिरी गाडीबाट झरे र खुरुखुरु सडक पेटीतर्फ लागे । सहचालकले माग्न पनि सकेनन्, उनले दिन पनि चाहेनन् ।
बर्दीको आडमा सामान्य मजदुरमाथि आर्थिक शोषण
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यस्ता दृश्यहरु कैयौँ देख्न सकिन्छ । बर्दी लगाएका ट्राफिक र प्रहरीहरु गाडी चढेर भाडा नतिर्ने प्रवृत्ती पुरानै हो । प्रत्येक व्यक्तिसँग त्यही १५/२० रुपैयाँ उठाएर नै गाडीवालाले गाडीको ऋण तिर्छ भने त्यसैबाट चालक र सहचालकले आफ्ना दैनिक गुजारा चलाउँछन् । ।
यसलाई प्रहरीको आवरणमा ठगी भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । प्रहरीको यो पवृत्तीलाई बर्दी आडमा सामान्य मजदुरहरुमाथिको आर्थिक शोषणका रुपमा लिन सकिन्छ । यदी उनीहरु बर्दीमा हुँदैनथे भने भाडा दिन वाध्य हुन्थे, सहचालकले पनि सहज रुपमा भाडा माग्न सक्थ्यो ।
हेर्दा सामान्य देखिएपनि सवारी चालकहरु ट्राफिक र प्रहरीले वर्दीको आडमा सामान्य मजदुरमाथि ज्यादती गरेको बताउँछन् । ‘त्यति थोरै रकम पनि नतिर्नु बर्दीको आडमा दादागिरी नै हो, थोरैथोरै जम्मा गरेर नै धेरै हुने हो । आज एक जनाले नतिर्ला, भोली अर्कोले नतिर्ला, यसैगरि वर्षभरिमा एक सवारी धनी र चालकलाई कति नोक्सान हुन्छ ?’ एक चालकले दुखेसो पोखे ।
कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक यातायात लामो समयपछि खुलेका हुन् । गाडीमै सवारी धनी, चालक र सहचालकले जीवन गाँसिएको हुन्छ । कोरोना महामारीले सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको अवस्था नाजुक नै बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि व्यक्ति अझै प्रहरी जत्तिको जिम्मेवार संस्थामा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरुले न्यूनतम जिम्मेवारी पनि पूरा नगर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ? त्यो बहसको विषय बन्न सक्छ ।
ट्राफिक प्रवक्ता भन्छन्, ‘भाडा नतिर्ने ट्राफिक प्रहरीमाथि कारवाही हुन्छ’
ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जिव शर्माले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने जुनसुकै व्यक्तिले पनि अनिवार्य रुपमा भाडा तिर्नुपर्ने बताउँछन् ।
मेनसमाचार सँगको कुराकानीमा ट्राफिक प्रहरीले भाडा नतिर्ने गरेको गुनासो आएका सम्बन्धित व्यक्तिलाई कडा कारवाही हुने बताएका छन् । ‘हामीले त्यसबारेमा बुझेको छैन, कसैबाट गुनासो पनि आएको छैन, यदाकदा सुनिन्छ तर सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा ट्राफिक प्रहरी हो भन्दैमा भाडा तिर्न नपर्ने भन्ने हुँदैन । यस्तो जानकारी आयो भने कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रहरीहरु सुध्रिएका छन्, अहिले त्यस्ता समस्या छिटफुट मात्र भेटिन्छः अध्यक्ष सरोज सिटौला
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा प्रहरीहरुले भाडा नतिर्ने प्रवृत्ती पुरानै रहेको बताउँछन् । ०४०/०४२ सालतिर यस्तो प्रवृत्ती व्यापक रहेको तर ०५०/०५५ सालसम्म आइपुग्दा केही कम भएको उनको भनाई छ ।
‘४० सालदेखि यातायात क्षेत्रमा छु, त्यतिबेला सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्ने कुनैपनि प्रहरी अधिकारीहरु भाडा तिर्दैनथे । अहिले प्रहरी केही सुध्रिएका छन् । भाडा नतिर्ने कहिँकतै भेटिन्छन् तर अधिकांशले तिर्छन्,’ उनले भने ।